कार चढ्ने चाहना छ? छ भने बजारमा ५ लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँसम्मका कार बिक्रीमा « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौं । कार चढ्ने चाहना सबैको हुन्छ । कतिपयलाई मूल्यका कारण यो चाहना बाधक बनेको हुन सक्छ । ब्रान्ड न्यू कार किन्ने सोच नबनाएका उपभोक्तालाई ध्यानमा राख्दै रिकन्डिशन कार बिक्रेताहरुले राम्रो अवसर उपलब्ध गराएका छन् ।
पछिल्लो समय बिस्तार हुदै गएको सेकन्ड ह्यान्ड कार बजार बिक्री ५ लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँसम्मका चल्तिका कार पाइन्छ भने त्यो भन्दा बढी मूल्यका पनि सेकेन्ड ह्यान्ड कार बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका छन् । यस्ता रिकन्डिशन हाउसहरुले ग्राहकबाट गाडी किन्दा त्यसको अवस्था, माइलेज, पार्टपुर्जा, नयाँ वा पुरानो कार के छ भन्ने आधारमा मूल्य तय गरेर खदिर गर्ने गर्छन् ।
पछिल्लो समय रिकन्डिशन हाउस दुईपाङ्ग्रेबाट चारपाङ्ग्रे सवारीमा उक्लन चाहने ग्राहकललाई आकर्षक खरिद बिक्री केन्द्रको रुपमा स्थापित भएका छन् । धेरै बिक्री गरेका गाडीहरुमा हुन्डाईको स्यान्ट्रो, टुसान र सन्ताफे तथा मारुतीको स्विफ्ट डिजायर, कार्गो भ्यान र मारुती भ्यान हुन् । प्राय, हुन्डाईको ग्रान्ड आई १०, सुजुकी स्विफ्ट, मारुती भिटारा ब्रेजा, वागेनआरको रिकन्डिशन मोडल खरिद गर्न चाहने ग्राहक बढी भएको पोदार बताउँछन् ।
नक्शालमा करिब १३ वर्षदेखि संचालनमा रहेको काठमाडौं अटोमोबाइलका महाप्रबन्धक सचिन कुईँकेल भन्छन् ‘उपयुक्त कन्डिसनका गाडीलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं, रिकन्डिशन व्यवसायकै कारण आफ्नो रोजाई र बजेट अनुसारका गाडी सबैले चढ्न पाएका छन् ।’ त्यस्तै, गाडी फेरिरहने शौखिनहरुले पनि आफ्नो पुरानो गाडी बेच्ने उपयूक्त थलोको रुपमा रिकन्डिशन हाउस पाएका छन् । उनिहरुले आफ्नो पुरानो गाडी यस्तो ठाँउमा बेच्छन् र नयाँ किन्छन् ।
काठमाडौं अटोमोवाइलले मात्र मासिक १५ देखि २० वटासम्म रिकन्डिशन कार बिक्री गर्ने गरेको कुईकेल बताउँछन् । उपत्यकामा यस्ता रिकन्डिशन हाउसहरु थुप्रै खुलेका छन् । ‘रिकन्डिशन को बजार ठूलो भइसकेको छ, नयाँ कारको व्यापारलई जस्तै यसलाई पनि व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न आवश्यक छ,’ कुईँकेलले भने ।
(स्रोत: मेरो अटो)